အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ လူထုနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင် – Online News Post
အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ လူထုနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်
ပရိသတ် တွေကို ရယ်မော ပျော်ရွှင် စေနိုင်တဲ့ အပြင် သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာလည်း ဒရမ်မာ မျိုးစုံကို ပိုင်နိုင် စွာ လုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ ဦးခင်လှိုင် ကို တော့ လူတိုင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်‌နော် ။ သူဟာ အနုပညာ လောကမှာ ဆယ်စုနှစ် များစွာတိုင်အောင် ရပ်တည် အောင်မြင်နေတဲ့ သူဖြစ်ပြီး ပရိ သတ် အားပေးမှု အခိုင် အမာ ရရှိ ထားသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
ခင်လှိုင် က တော့ ခုချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအ နေနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပြည်သူ လူထု နဲ့အတူ ရပ်တည် ကာ ပါဝင် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေ ဟာလည်း တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အားကောင်း လာ နေတာဖြစ် ပြီး အနုပညာရှင် တွေ အပါအဝင် ပြည်သူတွေကပါ တက်ကြွ စွာ ပါဝင် လှုပ်ရှား နေကြ တာဖြစ် ပါ တယ် … .
ခင်လှိုင် အပြင် အခြားသော အနုပညာရှင် များစွာ က လည်း လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ အားတက် သရော ပါဝင်ကြတဲ့ အပြင် တတ်နိုင် တဲ့ ဘက်က နေလည်း လှူ ဒါန်းမှု တွေ ပြုလုပ် နေ တာဖြစ်ပါ တယ် ။ အခု လည်း ခင်လှိုင် က အင်ဒိုနီး ရှား သံရုံးရှေ့ ကို သွားရောက် ကာ ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ် ပါ တယ် ။ တိုင်းပြည် အတွက် တက်နိုင် တဲ့ ဘက် က နေ ပါဝင် ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကို လေးစားမိ တာကြောင့် ဂုဏ်ပြု ပေးလိုက် ပါရစေ နော် … .
credit : Cele Zone
photo : Khin Hlaing
ပရိသတ္ ေတြကို ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစနိုင္တဲ့ အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာလည္း ဒရမ္မာ မ်ိဳးစုံကို ပိုင္နိုင္ စြာ လုပ္ေဆာင္ နိုင္တဲ့ ဦးခင္လွိုင္ ကို ေတာ့ လူတိုင္း သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္‌ေနာ္ ။ သူဟာ အႏုပညာ ေလာကမွာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ရပ္တည္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူျဖစ္ၿပီး ပရိ သတ္ အားေပးမႈ အခိုင္ အမာ ရရွိ ထားသူလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ခင္လွိုင္ က ေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအ ေနနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္သူ လူထု နဲ႔အတူ ရပ္တည္ ကာ ပါဝင္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ လူထု လႈပ္ရွား မႈေတြ ဟာလည္း တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ အားေကာင္း လာ ေနတာျဖစ္ ၿပီး အႏုပညာရွင္ ေတြ အပါအဝင္ ျပည္သူေတြကပါ တက္ႂကြ စြာ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ေနၾက တာျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ခင္လွိုင္ အျပင္ အျခားေသာ အႏုပညာရွင္ မ်ားစြာ က လည္း လက္ရွိ လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ အားတက္ သေရာ ပါဝင္ၾကတဲ့ အျပင္ တတ္နိုင္ တဲ့ ဘက္က ေနလည္း လႉ ဒါန္းမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ ေန တာျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခု လည္း ခင္လွိုင္ က အင္ဒိုနီး ရွား သံ႐ုံးေရွ႕ ကို သြားေရာက္ ကာ ျပည္သူ ေတြနဲ႔အတူ လူထု လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ တာျဖစ္ ပါ တယ္ ။ တိုင္းျပည္ အတြက္ တက္နိုင္ တဲ့ ဘက္ က ေန ပါဝင္ ခဲ့တဲ့ ခင္လွိုင္ ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ ကို ေလးစားမိ တာေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳ ေပးလိုက္ ပါရေစ ေနာ္ … .
Previous post ကြည့်ရှုသူတိုင်း အရမ်းအသဲယားသွားအောင် ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေ နဲ့ Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခန့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
Next post ပူလွန်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ မေပန်းချီနဲ့ ခရစ္စတီးနား